September 2018 - Puntland Mirror Believable Media Website
September 30, 2018 Puntland Mirror 0
Garoowe-(Puntland Mirror) Janaraal Siciid Maxamed Xirsi oo loo yaqaan Siciid Dheere, ayaa lagu waramayaa in uu qorsheynayo in uu u tartamo madaxweynaha Puntland ee doorashada 2019-ka. Ilo-wareed ka ag-dhow Janaraalka, ayaa warsidaha Puntland Mirror u […]
New York-(Puntland Mirror) Dowladda Federaalka Soomaaliya ayaa codsatay in laga qaado cunoqabateynta hubka. Khudbad uu ka jeediyay Golaha Ammaanka ee Qaramada Midoobay, Wasiirka Arrimaha Dibada Soomaaliya Axmed Ciise Cawad ayaa sheegay in maleeshiyada ay la […]
September 29, 2018 Puntland Mirror 0
Muqdisho-(Puntland Mirror) Maxkamada gobolka Banaadir ee magaalada Muqdisho ayaa maanta oo Sabti ah dhageysatay dacwad musuq oo loo heysto masuuliyiin katirsanaa Dowladda Federaalka Soomaaliya. Dacwada musuqa ayaa loo heystaa Agaasimihii waaxda dib-u-dejinta ee Wasaaradda Gargaarka […]
Garoowe-(Puntland Mirror) Haweenay shacab ah ayaa ku geeriyootay is-rasaasayn dhexmartay ciidamada ammaanka iyo koox daroogada iibisa oo ka dhacay Garoowe xalay, sida uu sheegay taliyaha ciidamada. Janaraal Muxiyadiin Axmed Muuse, oo ah taliyaha ciidamada ammaanka, […]
Garoowe-(Puntland Mirror) Xilli roobaadka Deyrta ayaa ka da’ay deegaano kuyaala Puntland. 24-kii saac ee ugu dambeeyay, gobolada Karkaar, Nugaal iyo qeybo kamid ah Mudug ayaa helay roobab fiican, sida ay warsidaha Puntland Mirror u sheegeen […]
September 27, 2018 Puntland Mirror 0
Brussels-(Puntland Mirror) Midowga Yurub ayaa iclaamiyay €100 milyan oo Yuro ah oo taageero miisaaniyadeed ah oo la siinayo Soomaaliya markii ugu horeysay, sida ay bayaan ku sheegeen maanta oo Khamiis ah. Bixinta miisaaniyada ayaa bilaabmi […]
Muqdisho-(Puntland Mirror) Bangiga Adduunka ayaa ogolaaday $80 milyan oo dollar oo deeq ah oo la siinayo Soomaaliya si ay ugu maalgeliso dib u habeynta maaliyadeed ee wadanka, lacagta ayaa noqoneysa markii ugu horeysay oo la […]
New York-(Puntland Mirror) Wasiirka Arrimaha Dibada Soomaaliya Axmed Ciise Cawad ayaa dhiggiisa dalka Ruushka Segey Lavrov kulan kula yeeshay magaalada New York ee dalka Mareykanka. Labada masuul ayaa kulankooda uga wadahadlay aragtida ku saabsan dhisida […]
Boosaaso-(Puntland Mirror) Maxkamada ciidamada Puntland ayaa maanta oo Arbaco ah xukun dil toogasho ah ku riday saddex xubnood oo katirsan ururada argagixisada sida Al-Shabaab iyo ISIS. Labo kamid ah xubnaha la xukumay ayaa katirsan ururka […]
Muqdisho-(Puntand Mirror) Dhul banaan oo kuyaala deegaanka Jazeera ee degmada Wadajir ee magaalada Muqdisho ayaa lagu wareejiyay ciidamadda Soomaaliya oo uu Turkigu uga dhisi doono xarun tababar, sida uu sheegay duqa Muqdisho. Duqa Muqdisho, Cabdirixmaan [...]